यसरी थाहा पाउनुस्, महिलाले यौन इच्छा देखाउने व्यवहार ! – Gandak News
यसरी थाहा पाउनुस्, महिलाले यौन इच्छा देखाउने व्यवहार !
गण्डक न्यूज द्वारा ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १६:०९ मा प्रकाशित 0
हरेक वयस्क अवस्थामा यौन चाहना रहेको हुन्छ । जुन स्वभाविक नै हो । विश्वभर महिलाहरुलाई बुझ्न कठिन हुन्छ एउटा मान्यता रहेको छ । एक अध्ययनका अनुसार महिलाको कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सकिदैंन र त्यसैले उनीहरुको व्यवहार पनि बुझ्न महन्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्ययनले महिलामा यौन चाहना भए पनि शब्दमा व्यक्त नगर्ने बताएको छ ।
महिलाहरुको यौन सम्पर्क गर्ने तिब्र इच्छा हुँदा हुदै पनि दवाएर राख्ने गर्छन । अत उनीहरुको आन्तरिक इच्छालाई पूरा गरिदिने जिम्मा पुरुषको हुन सक्छ । तसर्थ महिला पुरुषको नजिक हुँदा उनीहरुले देखाउने गतिविधिलाई विचार पुर्याएमा सहज हुन सक्छ ।
-यदि स्त्री तपाईको नजिक हुँदा लामो लामो सास लिइन भने बुझ्नुस् कि उनलाई उत्तेजना भइरहेको छ । महिलाहरु उत्तेजना भएपछि लामो लामो सास फेर्छन । यसका साथै कतिपय महिलाहरुले नजानिदो गरी पुरुषको संवेदनशील भागहरु छुने गर्छन् ।
-यदि स्त्रीले अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौ भएजस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने उनीलाई तपाईसँग संसर्ग गर्न मन छ ।
-यदि महिलामा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा भएमा अनुहार रातो हुने वा तापक्रम बढ्ने गर्छ ।
-महिला अनेपेक्षित रुपमा तपाईको नजिक आउन खोजिन वा तपाईलाई छुने बाहना खोजिन भने उनलाई यौन चाहना जागेको छ ।
-महिलाहरुले खुट्टाको बुढी औलाले भुई कोर्तन थालिन भने पनि उनीमा यौन चाहना छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।